Haweenka nadaafadda iyo dhar-dhaqista ku shaqeeya oo dhibaatooyin ka cabanaya - Radio Ergo
Haweenka nadaafadda iyo dhar-dhaqista ku shaqeeya oo dhibaatooyin ka cabanaya
Haweenaydan oo ku nool xerada Dan iyo Daacad waxay la kulantay kufsi xilli ay shaqaynaysay xaafad ka mid ah xaafadaha Muqdisho/Fardowsa Sheekh Cabdiraxmaan/Ergo
(ERGO) – Dumarka dagan xeryaha Barakayaasha Muqdisho ee ku shaqeeya dhardhaqista waxa ay la kulmaan waqtiyada qaar dhibaatooyin iskugu jira in loo diido lacagahii ay ku shaqeeyeen iyo in laga been abuurto.
Keliya intaa ma ku koobna dhibaatada ee waxaa jira in sidoo kale in xilliyo qaar ay la kulmaan kufsi.
Haweenka la kulma dhibaato xadgudubka galmo kuma dhiiradaan in ay sheegaan oo ay la wadaagaan xarumaha booliiska ama ururada ka shaqeeya wax ka qabashada tacaddiyada ka dhanka ah haweenka sabab la xiriirta amnigooda iyo in lagu takooro ama ceebeeyo falkii ay la kulmeen.
Dumarkaasi waxaa ka mid ah Kaltuumo Abiikar (ma aha magaceeda saxda ah) waa hooyo haysata lix carruur ah oo aabbahood ay kala tageen. waxa ay barakac tahay laba iyo toban sano toban, toban oo ka mid ay ku shaqeenaysay dhar dhaqis ay ku maarayso nolasha qoyskeeda.
Intii ay ku shaqaynaysay dhardhaqista, Kaltuumo labo jeer ayay sheegtay in la kufsaday weliba iyadoo uurleh.
“Labo mar ayaan la kulmay, mar oday waayeel ah ayuu ahaa, aniga oo laamiga taagan ayuu iweydiiyay qof dhardhaqo, (markaas baa dhahay) anaa dhaqaayo, markaas ayaan gaari fuulay, markaan xogaa soconay, dhankaan asluubta dhankeeda ayuu igala leexday, markaa juqda gaarnay, ayuu i dhahay aniga jismigaaga ayaan u baahanahay, dhaqow uma baahni,” ayay tiri Kaltuumo oo sheegtay in ay ninka ka codsatay in uu iska daayo balse u hanjabay.
Labo bilood, ayay haddana mar kale la kulantay kufsi kaga yimid nin ay shaqo u qabanaysay.
“Xaaladda kale Oodweyne ayaan joogay waddada aniga oo socda oo “dhaqow dhaqow” dhahaya ayaa wiil iskaabulo ah irid aan marayey soo furay, dhar baan dhaqis u rabaa ayuu dhahay ee kaalay ila heshii waan la heshiiyay, baafafka soo bixi ayaan ku iri, albaabka ayuu soo xirtay, waxa uuna igu yiri inta aadan shaqada bilaabin, adaa kaa shaqeenayaa, ee wax kasto aan sameeyay waa uu diiday, sidaas ayuu iga dhameestay,” ayay tiri Kaltuumo Kaltuumo oo 32 jir ah.
Kaltuumo iyo carruurteed waxaa ay ku nool yihiin Xerada Dan iyo Daacad ku taalla degaanka Garasbaalley ee duleedka Muqdisho.
Sidaas si la mid waxaa iyana fal kufsi Ruqiyo Xaamud (ma aha magaceeda rasmiga ah) ku ku nool Xerada Dan iyo Daacad.
Waxa ay ka shaqeeysaa dhardhaqista oo ay ka masruufto reerkeeda. Ruqiyo oo da’deeydu tahay 40 jir waxaa ay korisaa carruur ay ayeeyo u tahay oo agoon ah.
Labo sano iyo bar ka hor ayay sheegtay in ay la kulantay xadgudub galmo.
“Aniga oo dhar dhaqow ku jira, nin doob ah baa igu yiri dhar ii dhaq, asal waan u dhiqi jiray, sidii hore ayaan u haystaa, ninka meel ayuu igu jiray waa uu igu dhagay, kaligiis ayaa guriga joogay, hore anaa u dhaqi jiray, qof haddii aad isbarataan waad aamineysaa, anna waan aminay. Qori ayuu igu qabtay isdhig ama naftaada ayuu i dhahay, qori guriga ugu jiray ayuu ahaa, see yeelaa marka?,” ayuu yiri Ruqiyo oo ay ka muuqato daruuf iyo dan.
Maryan Taqal Xuseen oo ah madaxa arimaha haweenka iyo Xuquul insaanka ee Xarunta Horumarinta Haweenka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SWDC ayaa sheegtay in ay jiraan falal kufsi ah oo loo geysto haweenka soo barakacay, inkastoo ay xustay in aysan si gaar ah u diiwaangelin.
Maryan ayaa sheegtay in ay haween kuwa dharka dhaqa ah oo ay isku dayeen in ay ka caawiyaan in dacwadahooda ay maxmadaha geeyaan, hase yeeshee marka howsha loo billaabo ay qabyo uga tagaan, iyadoo u sababaysay in haweenkaas aysan waqti badan u hayn kiisaska , maaddaama ay qoysaskooda u shaqeynayaan.
IDAACADDA MAANTA ISNIIN 26-AUG-2019
IDAACADDA MAANTA TALAADO 27-AUG-2019